Spain Oo Aqbashay Inuu kusoo Xidho Markab Sida Muhaajiriin Oo loo Diiday Talyaniga.(Sawirro) | Awdalmedia.com
Spain Oo Aqbashay Inuu kusoo Xidho Markab Sida Muhaajiriin Oo loo Diiday Talyaniga.(Sawirro)
Markabkan ayaa muhaajirintaan oo ay ka mid ahaayeen 123 da'yar ah oo aan cidi wehlin, 11 caruur oo aad u yaryar iyo toddobo hawyn oo uur ah, ka soo qaaday doomo baca la buufiyay ka sameysan, kuwaasi oo ku sugnaa oo ka soo sharaacday xeebaha Libya.
Da'yarta ayaa u dhaxeysay 13 ilaa 17 jir, waxa ayna ka kala yimadeen Eritrea, Ghana, Nigeria iyo Sudan, sida uu sheegay weriye, Anelise Borges oo saarnaa markabka.
Ra'isalwasaaraha Spain Pedro Sanchez, kaas oo xilka la wareegay toddobaad ka hor ayaa markaba u ogolaaday in uu ku xirto deked ku taalla bariga magalada Valencia.
Balse xukuumadda Malta ayaa sheegtay in hay'ad laga leeyahay dalka Jarmalka oo lagu magacaabo SOS ay muhaajiriintan ka soo qaaday biyaha dalka Liibiya islamarkana sharciyan ay hoos imaanayaan Taliyaaniga.
Hay'adda SOS Mediterranee ayaa sheegtay in tiro muhaajiriin ah ay soo badbaadiyeen ka dib markii doontii ay la socday ay badda dhexdeeda ku jabtay.